Android Wear 5.1 ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Android Wear 5.1 သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှပြောနေတာအပေါ် Google ရဲ့အလေးပေးလျှော့ချခဲ့သည်, ကောင်းတစ်ဦးအရာအရာဖြစ်ပါသည်. အသစ် menu ကိုစနစ်ကလွယ်ကူ apps များနှင့်ချိန်ညှိချက်များရစေသည်, နှင့်ရိုးရှင်းသောပွတ်ဆွဲ-based interface ကိုထိုးထွင်းသိမြင်သည်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Android Wear 5.1 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ရိုးရှင်းပြီး, အသုံးဝင်သောနှင့်အကောင်းဆုံး - ယခုအဘို့” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 13 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 05.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Google ရဲ့စမတ်နာရီ operating system ကို, Android Wear, သူ့ရဲ့တတိယအဓိကတည်းဖြတ်မူအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, အသိပေးချက်များကိုကိုင်တွယ် - - နှင့်ဤအချိန်ကစမတ်နာရီအကောင်းဆုံးဘာလုပ်တယ်ပါဘူးတဲ့ဆိုနိုင်ပါတယ်နှင့်အသုံးဝင်သောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်ထွက်အဲဒီမှာကအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းအောင်.
တွဲဖက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်သည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Android Wear ယံဗားရှင်းနဲ့ Android ထုတ်ကုန်နှင့်အတူသာသဟဇာတဖြစ်ကြ 4.3 Jelly Bean နှင့်ချီ. နှစ်ခုချိတ်တွဲလွယ်ကူသည်. Google Play ကနေ download လုပ်အဆိုပါ Android Wear ပလီကေးရှင်း setup ကိုကိုင်တွယ်.
နာရီကိုဖွင့်မည်, က၏နာမတျောကိုသတိပြုပါနှင့် Android Wear app ကိုအတွင်းအပြင်ထုတ်ကုန်များ၏ list ထဲမှာတွေ့. တွဲဖို့ဟုတ်ပါတယ် Hit, အဲဒီအကြောင်းတစ်မိနစ်အဘို့အ sync ကြကုန်အံ့, သငျသှားဖို့ကောင်းသောနေ.
သူ့ရဲ့နှလုံးမှာ, Android Wear အားလုံးကတ်များအကြောင်း. Card များကို apps များဖြစ်နိုင်, အသိပေးချက်များ, သတင်းအချက်အလက်, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ကြွပ်. သူတို့ကအဖြစ်ပေါ်လာသောအခါလိုအပ်သော, glanceable သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပိုပြီးများအတွက်.
တစ်ဦးကအကြောင်းကြားစာ, ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလျဘာသာရပ်နှင့်ပေးပို့သူအဖြစ်အချက်အလက်များ၏သေးငယ်တဲ့အတိုအထွာတငျပွနိုငျ. အီးမေးလ်အပေါ်ပုတ်သင်တပြင်လုံးကိုအရာဖတ်ခွင့်ပြု. တစ်ဦးကဘယ်ဘက်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်သင်အီးမေးလ်တစ်စောင် archive သို့မဟုတ်စကားသံကိုမှတဆင့်အဲဒါကို reply နိုင်, ရုပ်ပြောင်သို့မဟုတ်အဆငျသငျ့အဖြေကို.
အသိပေးချက်များကိုဖယ်ရှားလွယ်ကူသည်, သငျသညျလွန်းအလွယ်တကူအနည်းငယ်သူတို့ကိုပယ်ပွတ်ဆွဲလျှင်နောက်ကျောသူတို့ကိုရတဲ့အတိုင်း. ပယ်ချခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းများအတွက်ပြန်လုပ်ရ button ကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့အထိပွတ်ဆွဲ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Android Wear သွားလာရိုးရှင်း. ပိုပြီးအဘို့အလက်ဝဲပွတ်ဆွဲပါ, ထုတ်ပယ်သို့မဟုတ်ပြန်သွားမှညာဘက်ကို, scroll ရန်နှင့်ဆင်းပုန်းရှောင်အထိ. နာရီမျက်နှာပုတ် app ကိုဖွင့်တင်ပေးတက်တတ်၏, Wear အသစ် 5.1, apps များ၏သေးငယ်တဲ့စာရင်းနှင့်အတူ. သူတို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်သို့မဟုတ်စာသားပေးပို့ဖို့မကြာသေးခင်နှင့်အကြိုက်ဆုံးအဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါ, လက်ဝဲပွတ်ဆွဲ, သို့မဟုတ်သူတို့ကိုခေါ်ခြင်း, ထို့နောက်တခါပိုပြီး Google Now ကိုပြောပြရန်.
အသုံးပြုသူများလည်းပဲတိုင်မား setting များအတွက်စကားသံကိုရှာဖွေမှုများကိုသို့မဟုတ်ပညတ်တော်များအတွက် Google Now ကိုဖွင့်သည်မီးကိုမှလက်ပတ်နာရီဖို့ "OK ကို Google က" ပြောနိုင်ပါတယ်, မှတ်စုအောင်သို့မဟုတ် apps များစတင်, ဥပမာအားဖြင့်.
မကျြနှာကိုကျော်တစ်ဦးသည်စွန်ပလွံအိပ်မှလက်ပတ်နာရီကိုထည့်လေ့မရှိ, တဦးတည်းရှိလျှင်ခလုတ်ကို၏သတင်းစာမအဖြစ်. လက်ကောက်ဝတ်-ဇာတ်ကားအမူအရာလည်းအခြားလက်မလိုဘဲတက် scroll သို့မဟုတ်ဆင်းကတ်များကိုတဆင့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
Android Wear 5.1 နာရီမှတိုက်ရိုက်က Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်ရန်စွမ်းရည်မိတ်ဆက်. မှန်သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ်ဆက်သွယ်မှုများကိုဝတ်ဆင်, လက်စွဲ setup ကိုမလိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Wi-Fi ကို password များနှင့်ကွန်ရက်များဆွဲ.
တဲ့အခါမှာဘလူးတုသ်၏အကွာအဝေးထဲက, နာရီအလိုအလျှောက်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာကအင်တာနက်ရှိပါတယ်အဖြစ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်ကို Wi-Fi ကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်. ဒါဟာ Google ရဲ့ဆာဗာများကို သုံး. တူညီ Wi-Fi ကွန်ယက်တလွှားနှင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်အင်တာနက်ကျော်နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်, သောအကြောင်းကြားစာများကိုဆိုလိုသည်, ရှာဖွေမှုများကိုမဆိုအခြား function ကိုပင်သောအခါမစမတ်ဖုန်းများ၏အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်.
ဒါဟာဖြစ်နိုင်သလိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ဒေသခံတစ်ဦးက Wi-Fi ကွန်ရက်ကျော်အနည်းငယ်သာသုံးနေပြီနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ဘလူးတုနှင့် Wi-Fi ကိုအကြားလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကို smoothest မဟုတ်ပါဘူး, ပတ်ပတ်လည်ယူ 20 စက္ကန့်. သင်အချိန်မှာလက်ပတ်နာရီကိုအသုံးပွုဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကသာသိသာသည်.
Android Wear လည်းစမတ်ဖုန်းတွင်တေးဂီတ Play နဲ့နောက်ကျောကကစားရန် Bluetooth ကိုနားကြပ်မှတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် Google ထံမှဂီတသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်. ပုံမှန်အားဖြင့်ဂီတ၏ 4GB အထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်, ဖွင့်စာရင်းများကိုသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်ထဲကနေနှင့်အယ်လ်ဘမ်ကတ်များအားဖြင့်သင် browse ဖြစ်စေ. Bluetooth ကိုကျော်ပုဒ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအတော်လေးခဲယဉ်းဘက်ထရီသက်တမ်းတစ်ဦးအနေဖြင့်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့်တို့သို့, အားသွင်းနေစဉ်တွင်နေ့ချင်းညချင်းကလုပ်နေတာအကြံပြုကြောင်းအဓိပ်ပာယျ.
ဝတ်ဆင် 5.1 ယခုတစ် lockscreen လည်းပါဝင်သည်, သော Android ရဲ့ပုံစံသော့ခတ် replicates နှင့်လက်ပတ်နာရီကိုသင့်လက်ကောက်ဝတ်ကိုချွတ်ယူသောအခါအတွက်ကန်ဖ​​ို့ရည်ရွယ်သည်. ငါကအချို့သောယံအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရတဲ့ကိစ္စများခဲ့ကြ.
အသိပေးချက်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဖတ်ရလွယ်, လာသောအခါတက်ကြွနာရီ၏မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖုံးအုပ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
မဆိုစမတ်နာရီ၏အဓိက function ကိုစမတ်ဖုန်းနှင့် Wear မှသတိပေးချက်များဖော်ပြရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်စမတ်နာရီ platform ကိုအထဲကအကောင်းဆုံးပါဘူး, Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်, Pebble နှင့် Samsung ရဲ့ Tizen.
Wear စမတ်ဖုန်းအပေါ်ကို Android နှင့်အတူဆက်သွယ်လမ်းကိုသင်ချင်တယ်ဆိုရင်မည်သည့်အကြောင်းကြားစာကိုဖွင့်ပြသထားတယ်ဆိုလိုသည်, ဘာမှလုပ်ဖို့လိုအပ်နေ app ကို၏ developer များမပါဘဲ.
ပြုစုသူအအကြောင်းကြားစာများအတွက်အမြန်လုပ်ရပ်ကဆက်ပြောသည်ပြီဆိုရင်, သူတို့တက်ကိုပြသ, လွန်း, သေးငယ်တဲ့ extensions တွေကိုနာရီအပေါ်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာပေး a​​pp ကိုမှဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်စဉ်.
အဆိုပါကဒ်ကို interface ကိုအကြောင်းကြားစာများပြသဘို့ဿုံသင့်တော်ပါတယ်. နယူးသူမြားကိုသေးငယ်တဲ့အတိုအထွာနှင့်အတူမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်တက်ဖြတ်တောက်နှင့်ကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာပယ်ချမဟုတ်လျှင်သူတို့သည်အစဉ်ပစ္စုပ္ပန်င့်ဆိုလိုသည်, နောက်ဆုံးပေါ်တဦးပထမဦးဆုံးပြသနှင့်အတူ, အရာလွယ်ကူပြီးအစာရှောင်အသိပေးချက်များကို triaging စေသည်.
မလိုချင်တဲ့အကြောင်းကြားစာများကိုတိုက်ရိုက်လက်ပတ်နာရီပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ Android Wear app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်းပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သင်လက်ပတ်နာရီပေါ်မှာမှသတိပေးချက်များချင်ကြပါဘူး Apps ကပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်, Overload တားဆီးဖို့အတွက် filter သို့လှည့်. wear လည်း Lollipop ရဲ့ "အဘယ်သူမျှမနားထောင်သောသူ, ဦးစားပေးသို့မဟုတ်အားလုံးကို "အကြောင်းကြားစာအစီအစဉ်များသို့မဟုတ် KitKat ကိုရဲ့အသံတိတ် mode ကို, အချိတ်ဆက်ဖုန်းပေါ်မှာ run နေ Android အတွက်အဘယ်သို့ဗားရှင်းပေါ် မူတည်..
Android Wear စံအဖြစ်မရှိကီးဘုတ်ရှိပါတယ်, အစားထိုကဲ့သို့သော "ကျွန်မလမ်းအပေါ်တာပါ" အဖြစ်အဆငျသငျ့အဖြေကိုအပေါ်မှီခို, စကားသံကိုသတ်ပုံသို့မဟုတ်ရုပ်ပြောင်. Voice ကိုသတ်ပုံတောင်အတော်လေးဆူညံပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးမက်ဆေ့ခ်ျအဘို့ခက်ခဲသည်. ရုပ်ပြောင်မကြာခဏတုံ့ပြန်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း, သငျသညျအဘယျသို့ခငျြတဲ့လက်ချောင်းပုံဆွဲအသိအမှတ်ပြုစာရင်းတစ်ခုကနေဒါမှမဟုတ် Google ကကောက်ယူဖြစ်စေ, သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. အားလုံးတုံ့ပြန်မှုစမတ်ဖုန်းအပေါ်တစ်ဦးအစိုင်အခဲဒေတာဆက်သွယ်မှုလိုအပ်.
Android Wear တစ် feature အသစ် 5.1 လက်-ရေးဆွဲရုပ်ပြောင်အသိအမှတ်ပြုရန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်.
Apps က built-in နဲ့မဟုတ်ရင်
Android Wear အများအားဖြင့်အကြောင်းကြားစာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အတိုအထွာပတ်ပတ်လည်ကိုအခြေခံပြီးကြောင့်, များစွာသောဆက်ကပ်အပ်နှံထား app များကိုရိုးရိုးမလိုအပ်နေကြတယ်.
Google ရဲ့ apps များ Fit ပါဝင်, စံအချိန်-စောင့်ရှောက် apps များ, Google Music Play, ပွက်ခဒိနျအတှကျအစီအစဉ်, တစ်ဦးမီးရှူး app ကိုနှင့် Google ရှာဖွေရေး.
Google Music Play နာရီတွင်တေးဂီတ၏ယာယီသိမ်းဆည်းခွင့်ပြု, တစ်ဦးချိတ်ဆက်စမတ်ဖုန်းတွင်တေးဂီတ၏သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု, Fit ခြေလှမ်းများခြေရာခံနေစဉ်, လှုပ်ရှားမှုနဲ့မော်နီတာနှလုံးခုန်နှုန်း, နောက်ကျောကို Google Fit ကို Android App ကိုမှနို့တိုက်ကျွေးမှု.
အခြား Google apps များ, ဂျီမေးလ်ကဲ့သို့, ကင်မရာနှင့် Maps ကို, ရှာဖွေမှုများကိုမှတဆင့်သို့မဟုတ်ဖုန်းမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ, အလှည့်-by-​​အလှည့်လမ်းလျှောက်ပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ကောက်ဝတ်မှလမ်းညွန်ကားမောင်း၏နောက်ပိုင်းတွင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ.
မျက်နှာများတဲ့အနိမ့်ပါဝါ '' ပတ်ဝန်းကျင် '' mode ကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ် apps များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးစောင့်ကြည့်, သောအဖြူအနက်ရောင်-and ဖို့ display ကို switches, နှင့် screen ပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ထိုကဲ့သို့သော Motorola ရဲ့အဖြစ်ထုတ်လုပ်သူ, Asus ကနှင့် LG နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကြံ့ခိုင်ရေး apps များပါဝင်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စမတ်ဖုန်း app များကိုထိန်းချုပ်ဘို့အခြား app များ. မကြာခဏဆိုသလိုဤအထပ် functions တွေ, ဒါပေမယ့်သုံးစွဲသူတွေဟာသူတို့မူလတန်းနှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာအဖြစ်အသုံးပြုချင်သော app ကိုကောက်နိုင်, ဥပမာအားဖြင့်, နာရီပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ Android Wear app ကိုမှတဆင့်လည်းကောင်း.
ကိုအနု Android Wear-သာ apps များအနည်းငယ်ဖြစ်ကြပြီးယခုအချိန်အထိအကြား, ထူးဆန်းသောခြွင်းချက်လက်ပတ်နာရီမျက်နှာများနှင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ရထားကြိမ်ဖော်ပြပေးသောဗြိတိန်နိုင်ငံမီးရထား app ကိုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ.
အများစုမှာ app များကို Android app များ၏ extensions တွေကိုဖြစ်ကြောင်းနှင့်စာရင်းရာနဲ့ချီရှည်လျားသည်, ထိုကဲ့သို့သော Evernote အဖြစ်ကြီးမားသောနာမည်တွေအပါအဝင်, WhatsApp ကို, Facebook က Messenger ကိုနှင့်ကတော့ Uber.
ထိုကဲ့သို့သော Runtastic အဖြစ်ကြံ့ခိုင်ရေး apps များ, Strava နှင့် Runkeeper လည်းရရှိနိုင်ပါသည်, အချို့သောနာရီအတွက် built-in GPS စနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ၏အားသာချက်ယူပြီး.
Google ထံမှ Android Wear များအတွက်ရရှိနိုင်မျက်နှာများရာနဲ့ချီရှိပါတယ်, လက်ပတ်နာရီထုတ်လုပ်သူများနှင့် Third-party developer များ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Google က Android Wear နှင့်အတူလက်ပတ်နာရီမျက်နှာများ၏သင်္ဘောများသေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ရွေးချယ်ရေး. အကောင်းဆုံးကိုတချို့က, သို့သော်, Third-party လက်ပတ်နာရီမျက်နှာများများမှာ, သော features နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမဆိုအရေအတွက်ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်; အချို့သောအခမဲ့, လစာအချို့.
ထုတ်လုပ်သူလည်းသူတို့ရဲ့နာရီနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက်ပတ်နာရီမျက်နှာများ bundle. ကချောမွေ့စွာတစ်ဦး analogue မျက်နှာသို့ပြက္ခဒိန်ချိန်းပေါင်းစပ်သောကြောင့်, Motorola ရဲ့ Pascual အထူးမှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်. အခြားသူများကရာသီဥတုပါဝင်, ခြေလှမ်းများ, ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ပင်မြန်နှုန်း, သင်ကလိုအပ်သင့်ပါတယ်.
မျက်နှာများတဲ့အနိမ့်ပါဝါပတ်ဝန်းကျင် mode ကိုရှိ Watch, သောလက်ပတ်နာရီမကျြနှာကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုခံသည်မဟုတ်သောအခါဖော်ပြပါတယ်. ဒီဘက်ထရီကိုချဲ့ထွင်ဖို့ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့အများဆုံး Android Wear နာရီအဆက်မပြတ်ပြသတဲ့လက်ပတ်နာရီမျက်နှာနှင့်အတူတစ်နေ့ကမှတဆင့်လုပ်.
မျက်နှာပြင်မှသာပုတ်လာသောအခါထွန်းသို့မဟုတ်တစ် button ကိုနှိပ်ကြောင်းဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံ mode ကိုပတ်ဝန်းကျင်မျက်နှာပြင်နှင့်လက်ကောက်ဝတ်-အလှည့်အမူအယာကိုပိတ်ထား, မျက်နှာပြင်အလင်းရောင်တက်စိတ်အာရုံထွေပြားဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်အခြေအနေများအဘို့နေရာလေးကိုသောဖြစ်ပါသည်.
Android Wear 5.1 LG ရဲ့အသစ်က G စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြအပေါ်စတင်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လကတည်းကထုတ်ပြန် Google ရဲ့ယံအားလုံးထွက်ကိုလှိမ့်ပါလိမ့်မည်. အားလုံးကတော့သူတို့ကိုအပေါငျးတို့သ features အသစ်ထောကျပံ့မညျ. အဆိုပါ LG က G စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, ဥပမာအားဖြင့်, Wi-Fi ကိုမရှိပါဘူး, စဉ် Sony ရဲ့စမတ်နာရီ3GPS စနစ်ရှိသည်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါရုပ်ပြောင်-drawing ထောက်ခံမှုမြတ်သောဖြစ်ပါတယ်နှင့် Bluetooth ဝေးလုံလောက်တဲ့ဆန့်မည်မဟုတ်သည့်အခါက Wi-Fi ကိုသုံးပြီးစမတ်ဖုန်းဖို့အဝေးကနေချိတ်ဆက်ဖို့နိုင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အသုံးဝင်သည်.
Android Wear ရဲ့အကြောင်းကြားစာ-ကိုင်တွယ်ပြီးမြန်ဆန်, Google က powered အသုံးဝင်သော interaction ကအခုတော့လက်ရှိရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီ platform ကိုလုပ်, ဒါပေမဲ့သင့်အသက်တာဂျီမေးလ်ကဲ့သို့ Google ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသို့ပလပ်သာလြှငျ, ပြက္ခဒိန်နှင့် Play စဂီတ.
အကောင်းအဆိုး: အစိုင်အခဲအကြောင်းကြားစာများ, အမြဲ-အပေါ်ဖန်သားပြင်, ဆွဲ-တစ်ဦး-ရုပ်ပြောင်, လျောက်ပတ်သောစကားသံကိုအသိအမှတ်ပြုမှု.
Cons: App ကိုပုံတူ, Third-party apps များမပါဘဲတစ်ကြံ့ခိုင်ရေး tracker ကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေး functions တွေ, ယုန်ကလေးလုံခြုံရေး.
• Samsung က Gear ကို S ပြန်လည်သုံးသပ်: တည်ဆောက်ဖုန်းနှင့်အတူစမတ်နာရီစမတ်ဖုန်းနေရာမှာအစားထိုးနိုင်?
• ဆန်းစစ်ခြင်း: Pebble ရဲ့စမတ်လက်ပတ်နာရီလည်းကြိုးစားပါဘူး, ဒါပေမဲ့သင်လိုအပ်သောအရာကိုမ
Android မှာ, App များ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Google က, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်နာရီ, Software များ, နည်းပညာ, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ
← Windows ကို 10 '' က Windows ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်’ LG ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →